जुम्लापछि सबैभन्दा बढी जाडो, काठमाडौंमा कति छ तापक्रम ? – Life Nepali
जुम्लापछि सबैभन्दा बढी जाडो, काठमाडौंमा कति छ तापक्रम ?
काठमाडौं, ९ पुस । काठमाडौंमा आज (बुधबार) यस वर्ष अहिलेसम्मकै चिसो महसुस गरिएको छ । आज बिहान मापन गरिएको तापक्रमअनुसार जुम्लापछि देशभरमै कम तापक्रम काठमाडौंको रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज बिहान पौने ९ (८ः४५) बजे गरिएको मापनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम २.९ डिग्री सेन्टिग्रेडमा झरेको मौसमविद् विभूति पोखरेलले जानकारी दिएकी छन् । यसअघि आजै बिहान ६ बजेको मापनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ३ डिग्री सेल्सियस थियो ।
फेरि पौने ९ बजे गरिएको मापनमा उपत्यकाको तापक्रम अझ घटेर २.९ डिग्रीमा झरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय समयअनुसार पछिल्लो मापनलाई नै आजको आधिकारिक न्यूनतम तापक्रम मानिन्छ । देशकै कम तापक्रम चाहिँ जुम्लाको छ । बुधबार बिहान पौने ९ बजे नै लिइएको मापनअनुसार त्यहाँको न्यूनतम तापक्रम माइनस ६.५ डिग्री सेल्सियस छ । जुम्लापछि सबैभन्दा कम न्यूनतम तापक्रम काठमाडौंकै भएको मौसमविद् पोखरेलले बताएकी छन् ।
उनका अनुसार यो, काठमाडौं उपत्यकाको यस वर्ष मापन भएको अहिलेसम्मको सबैभन्दा कम तापक्रम पनि हो । यसअघि मंगलबार पुस ८ गते यहाँको न्यूनतम तापक्रम ३.२ डिग्री थियो । मौसमविद् पोखरेलका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम अझै घट्दै जाने सम्भावना छ । महाशाखाको विवरणअनुसार काठमाडौंपछि कम तापक्रम दाङमा देखिएको छ । बुधबार बिहान पौने ९ बजेको रेकर्डअनुसार दाङको न्यूनतम तापक्रम ३.५ छ । त्यसैगरी, ओखलढुङ्गामा ४, सिमरामा ६.५ तथा धनकुटा र डडेल्धुराको समान ६.८ डिग्री सेन्टिग्रेड छ ।
Previous दाउरा न’पाउने गाउँमा नगरपालिकाले दियो निःशुल्क ग्यास चुलो
Next काडमाडौंमा अ’त्याधिक चिसो ! तापक्रम ०.६ डिग्री, अ’झै ओरालो लाग्ने सम्भावना :
चिसापानी पुलबाट हामफालेका किशोर अझै बेपत्ता, खोजी जारी
बालिकालाई ब,ला,त्कार गरेको अभियोगमा पोखरामा एक युवक प,क्राउ
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, चैत्र ३० गते सोमबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
को,रोना खोप लगाइसकेका वीपी प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशकलाई को,रोना पुस्टि
नेपालकी पहिलो मुस्लिम हिरोइन ओशिमा भन्छिन्- समाजको ‘डर’ छैन तर..
3 hours ago Life Nepali
12 hours ago Life Nepali